Posted by JuneOne at 10:02 PM
mae November 14, 2009 at 11:23 PM
လူလည်လေး lift ထဲ လိုက်သွားတယ်လား? အမေတော့ နှလုံးရောဂါရတော့မယ်
ခင်မင်းဇော် November 15, 2009 at 1:39 AM
ဘုရား ဘုရား ဒီအရွယ်က ဂရုအစိုက်ရဆုံး အချိန်ပဲ.. ဟိုဆွဲဒီဆွဲ ဟိုပြေးထွက် ဒီပြေးထွက်ပဲ ..
ThuHninSee November 15, 2009 at 3:34 AM
သားလေးမို့ ပိုဆော့တာထင်တယ်နော်။. နှစ်ယောက်ဆို..ကျော့တစ်ယောက်
မီယာ November 15, 2009 at 3:59 AM
ကျော့ရေ နောက်တယောက်ကို မိန်းကလေးမွေးနော် အမေနဲ့ အဖော်ရအောင်လေ... သားလေးက ပိုချစ်စရာ ကောင်းလာတယ်.. ပိုဆော့လာမှာလည်း သေချာတယ် နော်... :)
khin oo may November 15, 2009 at 6:36 AM
အဲဒီအရွယ်ပေါ့ တို့ တူ ..ပန်ကာထဲလက်သွားထဲ့တာ။ တို့တူက ဆန်ခွက် နဲ့လဲကစားတယ။် ပန်းကန်ထဲဆန်ထဲ့ပေးထားရင်အဲဒီဆန်တွေ ကို ယူလိုက် ဆုပ်လိုက် ပြန်ကြဲချလိုက်နဲ့ အတော်အကုန်အကျသက်သာတယ။် ခလေးတွေ လက်သန်စွမ်းစေတယ်လလို့ပြောတယ။် ဆော့ခိုင်းကြည့်ပါလား။
တယ်ခက်တာဘဲ ဓါတ်လျေကားထဲက ထွက်လာတဲ့ရုပ်ကတော့အပီဘဲ။ အမေသာ ပြာယာခတ်နေရတာ။
khin oo may November 15, 2009 at 6:42 AM
nu-san November 15, 2009 at 9:37 AM
သားလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်... သူ့ကြည့်ရတာ နားလည်လာတဲ့ပုံလေး.. :D ဒီအရွယ်က အရမ်းဆော့ကောင်းတဲ့ အရွယ်ဆိုတော့ အလွတ်မပေးရဲဘူး အိမ်က တူလေးတုန်းကလည်း ဆော့လွန်း ဆွဲလွန်းလို့ မျောက်မူးလဲလို့တောင် ခေါ်ရတယ်.. တချက်ကို အငြိမ်မနေတာ..... နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ သမီးလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်နော်.. :)
ပွင့်မြုးဇင် November 15, 2009 at 12:58 PM
သားပျောက်ရှာလိုက်ရလို့ မောနေပြီလား... အိမ်ကသားသားလဲ ဘယ်တော့လိုက်ရှာရမယ်မသိဘူး... ခုတော့လမ်းမလျှောက်တတ်သေးဘူးလေ...
Rita November 15, 2009 at 6:05 PM
lift ထဲက ထွက်လာတဲ့ပုံက။
ပထမတော့ အမေပါတယ်ထင်လို့များ ဝင်သွားလား မသိ။
နောက်တော့ မထူးပါဘူးဆို ခပ်တည်တည်နဲ့ လိုက်သွားပြီး ပွင့်မှ ထွက်လာတာ ဖြစ်မယ်။
yanmyo November 23, 2009 at 9:40 AM
ဟူး..အမေရိကန်မှာ ကလေးဖမ်းတွေများလွန်းလို့ နေ့တိုင်းစိတ်ပူနေရတယ်..ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖူးတာပေါ့၊
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့ကောင်မလေး November 29, 2009 at 7:47 AM
Moe Cho Thinn December 10, 2009 at 1:37 PM
ဒီအရွယ်က ဂရုစိုက်ရတယ် ညီမရေ..ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲလဲ ဆွဲတတ်တယ်။ အမ အမအငယ်တုန်းက ဆီပူအိုး လှမ်းဆွဲလိုက်တာ တကိုယ်လုံး ဆီပူလောင်ပါရောလား။ အရမ်းသတိထားရမယ်။ လမ်းပေါ်လဲ ပြေးထွက်တတ်တယ်။ လှေကားကနေလဲ လိမ့်ကျတတ်တယ်။ စိတ်ပူစရာတွေ လျှောက်ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အခု ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ပြန်တွေ့တာ ကံကောင်းလို့ နောင် သတိထားဖို့ ပြောတာပါ။